सीआईएन खोज देवीदेवताको चोरीतस्करी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण काठमाण्डौँ उपत्यका मन्दिरै मन्दिरको सहरको रूपमा परिचित छ । यहाँ जति धेरै मन्दिर देखिन्छन्, त्योभन्दा धेरै मूर्ति भेटिन्छन् । तर सांस्कृतिक र धार्मिक आस्था जोडिएका सयौँ बहुमूल्य मूर्ति थाहै नपाई गायब भइरहेका छन् । शुक्रबार, वैशाख २०, २०७६
रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना सोमबार, चैत ४, २०७५ विकासका सबै काममा सरकारले सघाइदियोस्, सामान्यतया हरेक नागरिकले सोच्ने यस्तै हो, तर कैलालीको टीकापुर र आसपास क्षेत्रका नागरिक आफ्नै सक्रियतामा सिँचाइ प्रणालीको व्यवसस्थापन गर्दै आएका छन् । स्थानीयको अभ्यासलाई सरकारले विकास आयोजनाको रूपमा मान्यता पनि दिएको छ ।
घ्याङफेदीबासी परिचय फेर्ने कसरतमा सोमबार, फागुन २७, २०७५ घ्याङफेदी लगायत आसपासका युवा पशुपालन, तरकारी खेती, शिक्षाको सुधारमा उदाहरणीय काम गरी गाउँको परिचय फेर्ने अभियानमा छन् । तर चेलिबेटी बेचबिखनको गाउँ भनेर लागेको परिचय बदल्ने चै कसरी ? घ्याङफेदीमा भेटिएका हरेक नागरिक आफैसँग उत्तर खोजिरहेका छन् ।
अस्थायी शिक्षकका नाउमा दलीय भर्ती केन्द्र मंगलबार, फागुन १४, २०७५ सामान्यतया विद्यालय तहमा प्रावी निम्नमावी र मावी गरि शिक्षकको तीन प्रकाक छ । सामान्यरुपमा हामीले बुझेको यही हो । स्थायी र अस्थायी गरि दुई किसिममा बाडिएका होलान । तर तथ्य त्यस्तो छैन सरकारी विद्यालयमा नै १२ प्रकारका अस्थायी शिक्षक छन् । तिनीहरुको नियुक्ती अझ अचम्म लाग्दो छ।
काठमाडौँमा चल्ने गाडीबाट दैनिक तीन करोड ठगी आईतबार, फागुन १२, २०७५ तपार्इँ सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नुहुन्छ ? दैनिक कति पटकजति गाडी चढ्नुहुन्छ ? काठमाण्डौँमा गाडी चढ्नु भएको छ भने हरेक पटक भाडा तिर्दा ठगिनु भएको छ ।
पूर्ण साक्षर जिल्लामा निरक्षर नागरिक धेरै सोमबार, फागुन ६, २०७५ अहिलेसम्म देशका ४७ ओटा जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा भएका छन् । युनेस्कोको प्रावधान अनुसार जिल्लामा ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएपछि पूर्ण साक्षर मानिन्छ । तर सीआइएनको सर्वेक्षणले घोषित जिल्लाका नागरिक कागजमा साक्षर वास्तविकतामा निरक्षर देखिए ।
दिसामुक्त जिल्ला, नागरिक सोध्छन्, 'शौचालय कहाँ मिल्ला' शुक्रबार, फागुन ३, २०७५ सरकारले २०६६ सालबाट खुल्ला दिसामुक्त अभियान सुरु गरेको थियो । एउटा जिल्लालाई खुल्ला जिल्लामुक्त बनाउन जनघनत्व हेरेर कम्तिमा १ करोड देखि ३ करोडसम्म खर्च भएको छ । सरदरमा एउटा जिल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्न २ करोड लागेको माने ६० जिल्ला घोषणा गर्दा १ खर्ब २० करोड रकम खर्च भएको छ ।
रातो रगतको डरलाग्दो कालो व्यापार मंगलबार, माघ २९, २०७५ अस्पतालहरुको अवस्था झन् भयावह छ । अस्पतालहरुले ७ सय देखि २ हजारसम्म लिइरहेका छन् । सरकारी निकाय राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार अहिले उच्च प्रविधिबाट रगतको नमूना परीक्षण गर्दा ग्रुपिङ र क्रसम्याचको २ सय पर्छ । सामान्य प्रविधिबाट परीक्षण गर्दा गु्रपिङ शुल्क ३५ रुपियाँ र क्रसम्याच शुल्क ५० रुपैंया लाग्छ ।
पानी जिन्दगानी -१ १७ घण्टा पानीसँग जोडिएको महिलाहरूको दुःख निवारण गर्ने बारे खानेपानी मन्त्री बीना मगरले सीआईएनसँग भन्नुभयो, 'पानीको लागि महिलाहरूको दैनिक १० घण्टासम्म खर्च भइरहेकाले सबैलाई स्वच्छ पिउने पानीको पहुँच पुर्याउन सरकार योजनाबद्ध र गम्भीर ढङ्गले लागिरहेको छ । 'पृथ्वी जति ठूलो छ, त्यसको ७० प्रतिशत पानीले ओगटेको छ । तर त्योमध्ये जम्मा तीन प्रतिशत मात्रै पानी पिउन लायक छ । ३ प्रतिशत मध्ये पनि ७० प्रतिशत पानी बरफ बनेर जम्दा १ प्रतिशतभन्दा कम पानीले सारा विश्वले गुजारा चलाइरहेको छ ।